June 2021 – Page2– Shwe Yaung Lan
အင်ဥကို ချက်စားတော့မယ်ဆိုရင် အရေးတစ်ကြီး သတိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
အင်ဥကို ချက်စားတော့မယ်ဆိုရင် အရေးတစ်ကြီး သတိထားသင့်တဲ့ အချက်များ အင်ဥကို ဒညင်းသီး၊ ပီလောပီနံ၊ ကြောင်လျှာသီး၊ ကြက်ဟင်းခါးသီး၊ ဂဏန်း၊ ဖားသား၊ ဒူးရင်း သီး၊ မျှစ်ချဉ်၊ ပုဇွန်ချဉ်၊ ငါးဖယ်ချဉ်၊ ငါးလေးချဉ်၊ ဆူးပုတ်၊ ပဲငပိတို့နဲ့ လုံးဝတွဲဖက်၍ မစားသင့်ပါ။ စားမိပါက မသေပေမယ့် မူးဝေခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ရင်ထဲမအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်းများ ခံစားရတတ်ပါသည်။ အင်ဥဟာ အစာအဆိပ်သင့်စေတဲ့ အစားအစာ ဖြစ်သောကြောင့် အင်ဥ ကြိုက် […]
တက်စီယာဥ်မောင်းရဲ့ ကားပေါ်မှာ သိန်းတစ်ရာတန် ပိုက်ဆံထုပ်ကြီး မေ့ကျန်ခဲ့သောအခါ…..
တက်စီယာဥ်မောင်းရဲ့ ကားပေါ်မှာ သိန်းတစ်ရာတန် ပိုက်ဆံထုပ်ကြီး မေ့ကျန်ခဲ့သောအခါ….. တက်စီယာဉ်မောင်ကိုအောင်ကြီးက သူ့ရဲ့ကားပေါ်မှာ စီးလာတဲ့ ခရီးသည် မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ ငွေကျပ်သိန်း၁၀၀ကို သွားရောက်ပြန်ပေးခဲ့တယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ယာဉ်မောင်းသူက..” ဒီနေ့ကျွန်တော့် ကားစီးတဲ့အစ်မ ကားပေါ်မှာသိန်းတစ်ရာကျန်ခဲ့ပါတယ်။ပြန်ရှာပြီးသွာပေးတော့တွေ့ပါတယ်။ သူအရမ်းပျော်သွားပြီးတော့မုန့်ဖိုးတစ်သိန်းပေးပါတယ်။မယူခဲ့ပါဘူး။ဝန်ထမ်းဖြစ်နေလို့ပါ”လို့ ပြောပြပါတယ် ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြည်သူတွေကလည်း သူ့ကိုဂုဏ်ယူလေးစားကြောင်း ချီးကျုးစကားပြောဆိုနေကြပါတယ်။ မူရင်း ရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါသည်။ Photo Credit to Owners
သက်ရက်သီး အလုံး(၇၀)ပါတာကို (7) သောင်းပေးပြီး အကုန်ဝယ်လိုက်လို့ အရမ်းပျော်သွားတဲ့ အဘွား
ပျော်လိုက်တာ သားရယ်….. အဖွား ဘဝမှာ ပထမဆုံး တနေ့တည်း အကုန် ရောင်းရတဲ့နေ့ 😍😍😍 အဖွား…တလုံး ဘယ်လောက်တုန်း? ၄လုံး ၁ ထောင်ကျပ်ပဲ ပေးပါ သားရယ် အဖွား နေပူတယ်နော်….😞 ဟုတ်တယ်…သားလေးရယ်….အဖွားက တ​ယောက်တည်းသမားဆိုတော့…ဒါလေးတွေ ရောင်းရမှ ထမင်းစားရမှာ 😢 အော….ဟုတ် အဖွား….အဖွား သရက်သီး ဘယ်နှလုံး ရှိတုန်း? ဗန်းထဲမှာ…၃၀လောက် ရှိမယ် ထင်တယ် သား…ခြင်းထဲမှာလဲ ၄၀လောက် ကျန်သေးတယ်ထင်တယ် သား…. […]
အရွယ်မတိုင်မီ ဆံပင်ဖြူခြင်း ကင်းဝေးစေမယ့် ဆေးနည်းကောင်း
ဆံပင်ဖြူခြင်းဟာ လူငယ်တော်တော်များများမှာ တွေ့လာရတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အသက် (၄၀)ကျော်မှသာ ဆံပင်ဖြူကြပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ အသက်(၂၀)ကျော်နဲ့ ဆံပင်ဖြူလာသူတွေ တွေ့လာရပြီ။ အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်ဖြူတာကို premature grey hair လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဆံပင်အရောင်ကိုဖြစ်စေတဲ့ ရောင်ခြယ်ဆဲလ် melanin ထုတ်လုပ်မှုနည်းလာလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မျိုးရိုး၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့မှုတွေက ဆံပင်အရောင်ကို ဖြူလာစေတယ်။ အသက်အရွယ်အရ ဆံပင်ဖြူသူတွေအတွက် သိပ်ကိစ္စမရှိပေမယ့် လူငယ်တွေအတွက်တော့ အိပ်မက်ဆိုးတွေသာ […]
ဘ၀အတွက် ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် တံမြက်စည်း (၂) ချောင်းရဲ့ ပုံပြင်လေး
(လုံးဝ good တယ်ဗျာ)ဖတ်လိုက်ရတာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ တစ်ခါတုန်းက တံမြက်စည်းသည်ကြီးက တံမြက်စည်းနှစ်ချောင်းကိုရောင်းချခဲ့တယ်။ ဝယ်တဲ့သူက တစ်ချောင်းကိုအိမ်ပေါ်မှာလှည်းဖို့နဲ့ တစ်ချောင်းကမြေကြီးမှာလှည်းဖို့ဆိုပြီး ဝယ်ခဲ့တာပေါ့။ မြေကြီးမှာ အလှည်းခံရတဲ့ တံမြက်စည်းကနေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဖှုန်တွေနဲ့လုံးပန်းကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေနဲ့ထိရကြမ်းတမ်းတဲ့ကျောက်စရစ်တွေနဲ့လဲ ကြုံရဆုံရတော့ သူ့ဘဝဟာ ကြမ်းသထက်ကြမ်းလာတယ်တဲ့။ ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးသူ့ဘဝသူ အားငယ်တတ်လာတယ်။ အိမ်ပေါ်မှာ နေရတဲ့တံမြက်စည်းလေးဖြစ်ရင်သိပ်ကောင်းမှာ သူ့ဘဝကျတော့နေလဲမပူ? ကြမ်းတဲ့ကျောက်စရစ်တွေနဲ့မတွေ့ရ? ကျင်ကြီးကျင်ငယ်နဲ့မဆုံနဲ့..သူ့ဘဝသာယာနေမှာဘဲဆိုပြီး သူ့မိတ်ဆွေ အိမ်ပေါ်လှည်းခံရတဲ့ တံမြက်စည်းကို အားကျနေတယ်တဲ့။ နောက်ပြီး သူကအိမ်ပေါ်မှာနေရတော့သူက သင်းပျံ့တဲ့ရနံ့တွေနဲ့နေရမှာပဲ..ငါလိုဘဝမကြမ်းလောက်ဘူး ငါလဲသူ့လိုဘဝရောက်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီး….အမြဲတွေးပြီးနေတတ်တယ်တဲ့။ ဒါနဲ့တစ်နေ့ […]
ပန်းတွေဝေနေအောင် ပွင့်ဖို့ ၊ အသီးတွေခဲနေအောင် သီးဖို့ အားဆေးစပ်နည်း
ပန်းတွေဝေနေအောင် ပွင့်အောင် ၊ အသီးတွေခဲနေအောင် သီးအောင် အားဆေးစပ်နည်း ပန်းတွေဝေနေအောင် ပွင့်အောင် အားဆေးဆပ်နည်း။ အမြစ်၊အပွင့်၊အသီး အတွက် 1: 1: 1 အချိုး အားဆေးလေးပါ 1-ပါတ်အတွင်းသိသာလာ ပါလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် အပင်မှအပွင့် အပွင့်မှအသီးအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်ရှင့် လိုအပ်သောကုန်ကြမ်းများ ==================== နို့ -200 cc တဘူး ၊ ပုဇွန် ငါးပိ တဇွန်း ၊ အချိုမှုန့်တဇွန်းတို့ပါဘဲ။ ပြုလုပ်ပုံ […]
အစားစားနေစဉ်နှင့် အစားစားပြီးပါက ရေခဲရေ (လုံးဝ) မသောက်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း
အစားစားနေစဉ်နှင့် အစားစားပြီးပါက ရေခဲရေ (လုံးဝ) မသောက်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းကိုကျန်းမာရေးဗဟုသုတအဖြစ်ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ မသိသေးသူများသိရှိနိုင်အောင်လည်း ပြန်လည်ကူညီပေးကြပါအုံးနော်။ ထမင်းစားနေစဉ် နှင့်ထမင်းစားပြီး၁၅မိနစ်ခန့်အချိန်အတွင်းရေခဲရေ၊အလွန်အေးသောရေနှင့်အအေးမျိုးစုံတို့ကိုမသောက်သုံးသင့်ကြောင်း နိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးစာမျက်နှာများမှာမကြာခဏဖတ်ရှုရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးပါရဂူကြီးများ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ အရထမင်းစားစဉ်ရေခဲရေသောက်သောလူများနှင့်ရေနွေးသောက်သောသူများကို နှစ်ရှည်လများလေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်ရာရေနွေးကိုသောက်သောသူများကရေခဲရေသောက်သူများထက်အနာရောဂါပိုမိုကင်းရှင်းပြီးအသက်ကလည်းပိုရှည်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ အစာစားနေစဉ်အအေးကိုသောက်လိုက်ပါက မကြာခင်ကမှစားထားသည့် အစာများကိုအဆီအခဲအဖြစ်၊အစိုင်အခဲအဖြစ်ပြောင်းလဲစေပြီးအာဟာရကိုမဖြစ်စေပဲရောဂါကိုသာဖြစ်စေပါတယ်။ ၄င်းအဆီအခဲများဟာအစာအိမ်၊အူသိမ်အူမတို့ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေပြီး၊အစာမကြေခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာခြင်း၊နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်း၊ရုတ်တရက်အသက်ရှုကျပ်စေခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေသည့်အပြင်ရေရှည်မှာအစာအိမ်ကင်ဆာ၊အူမကြီးကင်ဆာရောဂါတို့ကိုလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများစေပါတယ်။ ယခုဆိုလျှင် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးအလွန်မြင့်မားသည့်နိုင်ငံများမှာ(အထူးသဖြင့်) ဂျပန်နှင့် အမေရိကတို့လိုနိုင်ငံတို့မှာ အစာမစားမီစွပ်ပြုတ်တစ်ဇွန်းနှစ်ဇွန်းခန့်ကို အရင်သောက်ပေးဖို့နဲ့အစာစားပြီးလျှင်လည်းဟင်းရည်ပူပူသို့မဟုတ်ရေနွေးကိုသာ သောက်သုံးကြသည့် အလေ့အထကိုလေ့ကျင့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းထားနေကြပါပြီ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဂျပန်လူမျိုးတို့ဟာအသက်အရှည်ဆုံးနေထိုင်ကြရသည့်အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာကျန်းမာရေးအသိပညာပေးမြင့်မားမှု ဟာလည်းတစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်မိမ်ိတို့လည်းအနာရောဂါကင်းဝေးပြီးသက်ရှည်ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်စေ […]
တစ်လအတွင်း ကံကောင်းလာစေရန် နည်းလမ်း(၅)သွယ် (လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်)
1. မိမိဝင်ငွေ မည်မျှပင် နည်းပါးပါစေ 10ပုံ 2ပုံကို လှူပါ။ ရရှိလာသော ဝင်ငွေမှ ဖယ်ထား၍ မြတ်စွာဘုရားကို ဖယောင်းတိုင် တစ်ထုတ်ဖြစ်စေ. ပန်းတစ်စည်း ဖြစ်စေ လှူပါ။ မိဘများသက်ရှိထင်ရှားရှိလျင် မိဘများကိုလည်း လှူပါ 2. ဘာသာရေးအတွက် အချိန်ပေးပါ။ မည်မျှပင် အလုပ်ရူပ်သည် ဖြစ်စေ. တစ်နေ့လျင် 1နာရီမျှလောက် ဘုရားရှိခိုး ပုတီးစိပ်ခြင်း ပြုလုပ်ပါ 3. တိရစ္ဆာန် လေးများကို အစားကျွေးပါ။ မိမိတွင် […]
မြန်မာ လူမျိုးတွေကို တသက်လုံး ထည့်လာတဲ့ ဂျင်းတွေ ခေတ် ကို က လဖက်ညွှန့် ဆိုပြီးရာ ဘာရွက် အညွှန့်တွေ ကို ချဉ်ငံစပ် လုပ် မပုပ်ဆေးတွေ ထည့် ဆီစိမ် ပုလင်းနဲ့ ပိတ်ပြီး တံဆိပ်ကပ်လိုက်ရင် တစ်ဆယ်သား ၃၀၀ တန် ရာဘာညွှန့်တွေ က တပုလင်း ၆၀၀၀ တန်နာမည်ကြီး လက်ဖက်ညွှန့် တွေ ဖြစ်သွား တဲ့ ဂျင်းခေတ်။ (လဖက်စစ် […]
အချိုမှုန့်ထက် အဆတစ်ရာ ကောင်းပြီး ကျန်းမာရေးမထိခိုက်တဲ့ သဘာဝဟင်းခပ်မှုန့်လုပ်နည်း အခုခေတ်မှာ ကြက်သားအမှုန့်ဆိုတဲ့ ဈေးချိုချို အထုပ်တွေဟာ နေရာယူလာပါတယ်။ အချိုမှုန့်အစားထိုးသုံးကြပေမယ့် ရောင်းတန်းဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ဟာလည်း အချိုမှုန့်တွေ နည်းနည်းပါနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကိုဖတ်မိကြမှာပါ ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့အချိုမှုန့်ပြုလုပ်နည်းလေးကိုမိသားစုတွေ အတွက် ပေးချင်ပါတယ်။ အိမ်မှာလည်း သုံးနေတဲ့ နည်းလေးပါ။ ၁။ ကန်ဇွန်းဥ ၅ဝသား ၂။ ကြက်သွန်နီ -၂ဝသား ၃။ ကြက်သွန်ဖြူ- ၅ကျပ်သား ၄။ ဆား၊ထမင်းစားဇွန်း ၁ဇွန်း ၅။ […]